China izixhobo ezenzekelayo ze-CNC ze-CNC ze-Spindles ezimbini kunye ne-Drill Package mveliso kunye nabenzi | Gladline
Umatshini ozenzekelayo we-CNC umzila wee-Spindles ezimbini kunye ne-Drill Package
Intshayelelo: Ukulayisha ngokuzenzekelayo izinto
Zokuluka ezimbini kunye drill package
Yenza ngokwezifiso, enye indibaniselwano yokuluka iyanyanzeliswa
Ngoba Ngokhuni CNC umzila ngu iyafuneka? KubaCNC umzila umatshini inokunceda abantu ukuba basindise abasebenzi, bagcine izinto, kwaye baphucule ukusebenza kwemveliso.
Inkqubo yolawulo lwe-Taiwan SYNTEC 6MD
Izinto zokulayisha ibhentshi yomsebenzi oncedisayo
Imoto esulungekileyo ye-servo
Izinto zokulayisha i-sucker
Coca isixhobo sokucoca
I-Woodworking yethu ye-CNC Router yenziwe ngokwezifiso.
Iqela loMatshini Ngokhuni CNC kumzila
Stroke sasemsebenzini 2500 * 1700 * 150mm
Motor yokuluka 6KW
Inkqubo yeSeva Ixabiso le-encoder ye-850W yexabiso elipheleleyo
Inkqubo yokuSebenza ETaiwan SYNTEC 6MD
Indlela nokubotshwa 25mm PVC itheyibhile adsorption
Umbane weVoltage esezantsi Schneider
Ukuqhawulwa kombane I-4KVA inyibilikisi engaxutywanga yobhedu
Ubunzima bomatshini 3.5T
Ubungakanani boomatshini 3500 * 2350 * 1800mm
ATC CNC kumzila Intshayelelo:
Ukudityaniswa okugqibeleleyo kokondla okuzenzekelayo, ukusika okulungiselelwe, ukubetha ngenqindi, ukusika, ukusika okuzenzekelayo, kunye neenkqubo ezingaphazanyiswa kunokwandisa ukusebenza kakuhle kunye nemveliso. Ukuhambelana okunamandla kunokudityaniswa ngokudibeneyo kunye nesoftware enye.
2.Adopt seemodyuli zoyilo, ezikhethiweyo, zokujija enye + ye-CNC yokugrumba iphakheji, yokuluka kabini + ipakethe ye-CNC, izixhobo zokuluka ezintathu, isixhobo esisodwa sokutshintsha izixhobo zokugcina izixhobo, isixhobo sokutshixa esinye isixhobo esizenzekelayo esiguqula indawo yokugcina izixhobo + ze-CNC, iintlobo ezintlanu zeemodyuli.
3.The CNC umzila isebenzisa 150 * 150mm elingqingqwa kabini-umaleko kabini isakhiwo inkxaso, isakhiwo imbonakalo yobungcali isakhiwo, tempering okanye ukungcangcazela unyango ukwaluphala, kunye nepentahedral yokungenisa iziko lokulungisa intsimbi ephezulu-ngqo processing wokugaya.
I-4.I-CNC Router yamkela uyilo loyilo lwama-32 * 32 enesixhobo esikhulu sokuqhuba, esizinzileyo ekusebenzeni, ngokuchaneka okuphezulu nangokukhawuleza. Isikrufu sinokungqina ngokupheleleyo ngothuli. Isiporo sikaloliwe samkela iirayile zesikhokelo ezingama-30, ezihamba kakuhle.
Wood CNC umzila Machine Working Principle:
Umgaqo osebenzayo we-CNC Router kukusebenzisa isoftware yokukrola ukucwangcisa kunye nokubekwa kwikhompyuter, emva koko udlulise ulwazi lwefayile evelisiweyo kumlawuli. Isilawuli sivelisa ulwazi lokubetha olunokuqhuba i-stepper motor okanye i-servo motor ngokolwazi olufunyenweyo. Hayi, lawula umatshini ophambili womatshini wokusika we-CNC ukwenza i-X, Y, Z ekroliweyo ye-axis ezintathu kunye nokusika isixhobo sendlela. Isantya esiphezulu sokujikeleza ngentloko kumatshini wokusika we-CNC, ngesixhobo sokusika esiqwalaselweyo ngokwento eqhubayo, usika izinto ezenziwayo ezizinzileyo ekusebenzeni komatshini wokubamba, kwaye unokukrola iiflethi ezahlukeneyo okanye ezinciphise imilo emithathu kunye nemibhalo ezicwangcisiweyo kwikhompyuter, Gqibezela umsebenzi wokukrola ozisebenzelayo.
Okulandelayo: Zenzekelayo Woodworking CNC umzila kabini Worktable ezine zokuluka
I-China Cnc umzila
Umzila waseTshayina Cnc
Cnc umzila Ifenitshala
Cnc umzila Machine For Wood
Cnc umzila Umshini Itafile
Cnc Itafile umzila
I-CNC Side Drilling Machine
Oluzenzekelayo Woodworking CNC umzila Worktab Double ...